र यो पनि | गृहपृष्ठ | Page 6
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट विस्थापित हुनेमा ८० प्रतिशत महिला हुन्छन् । महिलाहर...	बिस्तृतमा
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुने एक नयाँ अध्यनयले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट विस्थापित हुनेमा ८० प्रतिशत महिला हुन्छन् । महिलाहर...	बिस्तृतमा
स्मार्टफोनले वातावरणलाई क्षति पुर्‍याउँछ !
सन् २०४० सम्म स्मार्टफोन र डाटा सेण्टर वातावरणलाई सबैभन्दा धेरै क्षति पु¥याउने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) बन्ने एक नयाँ अध्ययनले चेतावनी दिएको छ । आईसीटीले उत्सर्जनमा यसअघि अनुमान गरे...	बिस्तृतमा
सन् २०४० सम्म स्मार्टफोन र डाटा सेण्टर वातावरणलाई सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याउने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) बन्ने एक नयाँ अध्ययनले चेतावनी दिएको छ । आईसीटीले उत्सर्जनमा यसअघि अनुमान ग...	बिस्तृतमा
हाइस्कूल व्यवहारबाट व्यावसायिक सफलताको अनुमान !
हाइस्कूलमा गरिने व्यवहारले मानिसको जीवनको व्यावसायिक सफलताबारे अनुमान लगाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । विद्यालयमा जिम्मेवार रहेका, अनुशासित बनेका र लेखन कलामा पनि पोख्त भएका युवाले हाइस्क...	बिस्तृतमा
आर्थिक हैसियतको पहिचान अनुहार हेरेरै !
कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर ऊ धनी छ कि मध्यम वर्गीय हो वा गरीब भनेर तपार्इं खुट्याउन सक्नुहुन्छ ? अनुहार हेरेरै मानिसको आर्थिक हैसियत थाहा पाउन सकिने जर्नल अफ पर्शनालिटी एण्ड सोसियल साइकोलोज...	बिस्तृतमा
कम्प्युटर कक्षामा कम्प्युटर नै छैन !
दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र घानाको एक विद्यालयमा कम्प्युटरको पढाइ त हुन्छ, तर त्यसका लागि कम्प्युटर भने छैन । घानाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको कुमासीस्थित एक विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई कम...	बिस्तृतमा
जन्मदरको प्रवृत्ति हेरेर मन्दीको प्रक्षेपण गर्न सकिएला ?
कुनै स्थानको जन्मदर र आर्थिक मन्दीबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? जन्मदरको प्रवृत्ति हेरेर आर्थिक मन्दीको प्रक्षेपण गर्न सकिएला त ? यस्तो प्रश्न सुन्दा तपाईं हामीमध्ये धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । त...	बिस्तृतमा
स्मार्टफोनले पेन्सिल चलाउन बिर्सायो !
लण्डन (बेलायत) । आजको समयमा ठूला मानिसमात्र नभई बालबालिका पनि स्मार्टफोनप्रति आशक्त हुँदै गएका छन् । आमाबुबा व्यस्त हुँदा स्मार्टफोन उनीहरूको सबैभन्दा प्रिय साथी बनेको छ । तर, स्मार्टफोन र ट...	बिस्तृतमा
कागज र कलमबाट बिजुली !
हामीले पानी, हावालगायत तŒवबाट बिजुली निकालेको त देख्दै र सुन्दै आएका छौं । जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले बिजुली निकाल्न वातावरणमैत्री र सस्तो तरीका फेला पारेका छन् । उनीहरूले कागज र कलम (पेन्सिल)ब...	बिस्तृतमा